IIVESI EZINGAMA-36 EZIMALUNGA NOMTSHATO KUNYE NEEKOWUTI ZEBHAYIBHILE NGOTHANDO - UBUDLELWANE
Eyona Ubudlelwane Iivesi ezingama-36 ezimalunga noMtshato kunye neeNowuthsi zeBhayibhile malunga nothando
Iivesi ezingama-36 ezimalunga noMtshato kunye neeNowuthsi zeBhayibhile malunga nothando
Ukukhangela ukufundwa komtshato, izibhalo ngothando okanye isikhokelo somtshato wakho? Funda ezi ndinyana zeBhayibhile zingama-368 ngomtshato nothando. Ifoto kaPetronella Ukuhlaziywa ngoJulayi 06, 2020
Abantu abatshatileyo abanqwenela ukubonisa ukuzinikela kwabo omnye komnye kunye nokholo lwabo bahlala besiya kwiivesi zeBhayibhile malunga nomtshato xa beceba umtshato wabo. Kwababini ubomi babo busekelwe elukholweni lwabo, uceba umtshato ayisiyokucwangcisela kuphela ubomi kunye, kodwa ikwangokucwangcisa ixesha lokunqula kunye nokuzinikela ngokomoya. Umtshato obandakanya iivesi zeBhayibhile malunga nothando kunye nezibhalo zomtshato azincedi kuphela isibini ukuba siqinise ubomi babo kunye, kodwa sikwabanceda ukuba baqinise ukuzibophelela kwabo njengabantu abatshatileyo kwinkolo yabo. Ezi zibhalo zothando oluvela kwiNcwadi eNgcwele zisebenza njengezikhumbuzo zokomoya kunye neemvakalelo zothando enabelana ngazo njengesibini kwaye zikunika indlela yokuhlonipha iinkolelo zakho zonqulo ngelixa ubhiyozela nabahlobo kunye nosapho.
Iivesi zeBhayibhile malunga nomtshato zikunika ithuba lokwabelana ngeengcinga zakho kunye neemvakalelo zakho ngendlela emele ukuba ungubani, nokuba ezinye izimvo zakho zisenokungabikho. Akukho lizwi libhetele kunelizwi likaThixo, kwaye ukufaka iivesi zeBhayibhile ngothando kuyanceda ukuba uthethe ngokholo lwakho. Kukho amaxesha apho kuphela isiqwenga esikhethwe ngononophelo siya kwanela, kodwa ukufumana iivesi ezichanekileyo zeBhayibhile ngothando kunokuziva kunzima. Ngoku akuyomfuneko ukuba ufunde iBhayibhile ngokwakho ukuze ufumane amagama afanelekileyo.
Siqokelele ezi vesi zeBhayibhile malunga nomtshato nothando ukukunceda uvakalise uvuyo, umbulelo kunye nolonwabo oziva unalo ngokubaluleka kwakho ngelixa unika imbeko kwinkolo yakho. Ngale ndima malunga nothando, unokubonisa uthando lwakho kunye nokuzibophelela komnye nomnye kunye neenkolelo zakho. Nazi ezinye zeevesi zeBhayibhile ezixabisekileyo malunga nothando, umtshato kunye nobudlelwane onokuzibandakanya kumhla wakho womtshato.
Iivesi zeBhayibhile malunga noMtshato
Iivesi zeBhayibhile ngothando
Iivesi zeBhayibhile malunga noBudlelwane
IBhayibhile iqulethe izihlandlo ezininzi ezibonisa ubungcwele nobuhle bomtshato. Izibhalo zayo zothando lwemibongo zichaza ngokucacileyo ukuba kuthetha ukuthini ukuba sothandweni kunye nokuzibophelela kwelinye lakho elibalulekileyo ubomi bakho bonke. Ezi ndinyana zeBhayibhile malunga nomtshato zezona zilungileyo ukongeza kwizibhambathiso zakho zomtshato, kwaye wenze ufundo oluhle ukunceda ukwenza umsitho wakho ubaluleke ngakumbi. Kwi-toast yakho yokwamkela, iinkqubo zomtshato okanye izimemo, cinga ukusebenzisa ezinye iivesi zeBhayibhile malunga nothando umntu wonke anokuziqonda. Emva kwayo yonke loo nto, zininzi iindlela zokuthandana ngaphandle komtshato.
1. IGenesis 1: 27-28: Wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe; wamdala ngokomfanekiselo kaThixo; wadala indoda nenkazana. Wabasikelela uThixo. Wathi uThixo kubo, Qhamani, nande, niwuzalise umhlaba niweyise; nibe nobukhosi ezintlanzini zolwandle, nasezintakeni zezulu, nasezintweni zonke eziphilileyo ezinambuzelayo emhlabeni. '
2. UMalaki 2: 14-15: 'Ke nina nithi,' Kutheni engenzi njalo? ' Ngenxa yokuba uYehova ebelingqina phakathi kwakho nomfazi wobutsha bakho, lowo ungathembekanga kuye, nokuba uliqabane lakho, ngumfazi womnqophiso wakho;
3. UIsaya 54: 5: Ngokuba indoda yakho nguMenzi wakho, ogama lakhe linguYehova wemikhosi; yaye Lowo Ungcwele kaSirayeli nguMkhululi wakho, ubizwa ngokuba nguThixo womhlaba wonke. '
INgoma yazo iiNgoma 8: 6-7: Ndibeke njengetywina entliziyweni yakho, njengetywina engalweni yakho, kuba uthando lunamandla njengokufa, umona uyingcwaba njengengcwaba. Amalangatye abo ngamalangatye omlilo, Ngamadangatye kaYehova. Amanzi amaninzi akanakulucima uthando, nemilambo ayinakulurhaxa. Ukuba umntu uthe wanikela ngothando bonke ubutyebi bendlu yakhe, uya kudelwa kuphele.
5. Kwabase-Efese 4: 2-3: 'Ngokuthobeka konke, nokuthantamisa, ngomonde, ninyamezelana ngothando, nikulangazelela ukugcina ubunye boMoya ngentambo yoxolo.'
6. KwabaseKolose 3:14: 'Ngaphezu kwazo zonke ezi zinto zintle nxibani uthando, olubabopha bonke ndawonye ngobunye obugqibeleleyo.'
INtshumayeli 4: 9: Kulungile ukuba babe ngababini kunokuba abe mnye, kuba banomvuzo olungileyo ngemigudu yabo. Ukuba bathe bawa, omnye unokunceda omnye. Kodwa velana nabani na owayo kwaye kungekho namnye wokumnceda. Kananjalo ababini, bathe balala ndawonye, ​​baya kuva ukuswela; Ke umntu aziva eshushu yedwa na?
Kwabase-Efese 5:25: 'Ngamadoda, thandani abafazi benu, kanye njengokuba noKrestu walithandayo ibandla. Wanikela ngobomi bakhe ngenxa yakhe. '
izimvo zepati yeklasi ye-bachelorette nyc
9. IGenesis 2:24: Ngenxa yoko indoda yomshiya uyise nonina, inamathele kumkayo, babe nyama-nye ke.
INtshumayeli 4:12: 'Nangona omnye angoyiswa, ababini banokuzikhusela. Intambo enemicu emithathu ayiqhawuka ngokukhawuleza. '
11. UMarko 10: 9: Oko ke ngoko uThixo akumanyileyo, makungahlulwa mntu.
12. Kwabase-Efese 5: 25-33: Nina madoda, bathandeni abafazi benu, njengokuba naye uKristu walithandayo ibandla, wazinikela ngenxa yalo, ukuba alingcwalise, elihlambulule ngokuhlamba kwamanzi ngelizwi; ukuze alizise ibandla kuye ngobuqaqawuli, kungabikho ibala okanye imibimbi okanye nayiphi na into enjalo, ukuze abe ngcwele engenasiphako. Ngokunjalo namadoda amele abathande abafazi bawo njengemizimba yawo. Lowo umthandayo umkakhe, uyazithanda; Kuba akukho namnye wakha wayithiya eyakhe inyama, kodwa uyayondla, ayiphathe ngononophelo, njengokuba noKristu esenjenjalo kulo ibandla, ...
Bukela ividiyo ehambelana nayo
IBhayibhile inokuthetha okuninzi malunga nezibophelelo zothando kunye nokuzinikela.Iivesi zeBhayibhile ngothandoThetha ngothando olugqibeleleyo ekufuneka wonke umntu abe nalo kubahlobo, usapho kunye noluntu, ndingasathethi ke ngeNkosi. Nangona kunjalo, iivesi zeBhayibhile malunga nothando zikwabonisa ukuvela kwamandla kunye nethemba olunokuboniswa luthando. Kunokuba nzima ukubeka iimvakalelo zakho komnye ngomnye ngamagama, kodwa ezi ndinyana zeBhayibhile malunga nothando zibonakala ngathi zithimba ubume bayo ngokuchanekileyo.
13. KwabaseRoma 13: 8: Musani ukuba natyala lanto mntwini, lingelilo elokuthandana; kuba omthandayo omnye uzalise umthetho.
14. Eyoku-1 kwabaseKorinte 13: 4-5: Uthando lunomonde, uthando lunobubele. Ayinamona, ayiqhayisi, ayizigwagwisi. Ayibathobi isidima abanye, ayifuni okwayo, ayinakucaphuka msinya, ayigcini ingxelo yobubi. '
15. Eyoku-1 kwabaseKorinte 13: 2: 'Ndingafanelana ndinaso nesiphiwo sokuprofeta, ndinako ukuqonda zonke iimfihlakalo nokwazi konke, nokuba ndinokholo lokushukumisa iintaba, kodwa ndingenalo uthando, ndiyinto engento.'
Iqela ngaphambi komtshato womtshakazi
16. 1 KwabaseKorinte 16:14: 'Yenza yonke into ngothando.'
INgoma yazo iiNgoma 8: 7: 'Amanzi amaninzi akalucimi uthando; imilambo ayinakukukhukulisa. Ukuba umntu anganikela bonke ubuncwane bendlu yakhe ngenxa yothando, ibiya kugculelwa. '
18. Iindumiso 143: 8: Ndivise kwakusasa inceba yakho, Ngokuba ndikholose ngawe. Ndazise indlela endiya kuhamba ngayo: Ngokuba umphefumlo wam ndiwunikele kuwe.
19. Imizekeliso 3: 3-4: Uthando nothembeko malungaze lukushiye; Zibophe emqaleni wakho, Zibhale elucwecweni lwentliziyo yakho. Uya kwandula ke uzuze ubabalo negama elihle emehlweni kaThixo nawabantu. '
20. 1 Yohane 4:16: 'Kwaye siyazi kwaye sixhomekeke kuthando uThixo analo ngathi. Uthixo Luthando. Lowo uhleli eluthandweni uhleli kuThixo, noThixo uhlala kuye.
21. Kwabase-Efese 4: 2: 'Thobeka ngokugqibeleleyo kwaye ubaphathe kakuhle; yibani nomonde, ninyamezelana ngothando.
22. Eyoku-1 kaPetros 4: 8: Ngaphezu kwakho konke, thandanani kakhulu, kuba uthando lugubungela inkitha yezono.
23. UYohane 15:12: Nguwo lo umthetho wam, wokuba nithandane, njengoko ndanithandayo nina.
24. 1 kwabaseKorinte 13:13: Ngoku ke zintathu izinto eziya kuhlala zihleli: lukholo, nethemba, nothando. Eyona inkulu ke kuzo apho luthando.
Ingoma yazo iiNgoma 4: 9: 'Uyithimbile intliziyo yam, dade wethu, mtshakazi; uyithimbile intliziyo yam ngokujonga nje ngamehlo akho, ngejikazi elinye lomqala wakho. '
Akukho ncwadana yemigaqo yobudlelwane ikuxelela ukuba woyise njani imiqobo kwaye uqinise ubudlelwane onabo nabantu obathandayo (kodwa Ihlala ihleli unokunceda). Ngombulelo, iivesi zeBhayibhile ngothando zisebenza njengezikhokelo ezibalaseleyo; ezi zibhalo zibonelela ngobucwebe obunokukunceda ujonge amahla ndinyuka othando, kunye nokudlulisa iingcinga zakho ezisuka entliziyweni kwiqabane lakho elizayo. Kukho inani leemibhalo zomtshato kunye neevesi zeBhayibhile malunga nothando oluchaphazela umxholo ubudlelwane onokufuna ukuyithetha ngosuku lwakho lomtshato.
26. AmaHebhere 10: 24-25: 'Kwaye masiqwalasele indlela esinokukhuthazana ngayo eluthandweni nasemisebenzini emihle, singayeki ukuhlangana kunye, njengoko abanye besenza njalo, kodwa sikhuthazane-ngakumbi njengoko ubona uMhla usondela.'
27. Imizekeliso 30: 18-19: 'Zintathu izinto ezindothusayo-hayi, zine izinto endingaziqondiyo: indlela ukhozi oluhamba ngayo esibhakabhakeni, indlela inyoka ebaleka ngayo elityeni, indlela inqanawa ehamba ngayo elwandle, indlela indoda ethanda ngayo umfazi. '
28. 1 Yohane 4:12: 'Akukho namnye wakha wambona uThixo; ukuba sithi sithandane, uThixo uhleli kuthi, nothando lwakhe lugqibelele ngaphakathi kwethu.
29. Imizekeliso 31:10: 'Ngubani onokufumana umfazi onesidima? Kuba ixabiso lakhe lingaphezulu lee kwiikorale.
30. URute 1: 16-17: 'Musa ukundibongoza ukuba ndingakushiyi, Okanye ndijike ekulandeleni; Kuba apho uya khona, ndiya kuya nam; Apho uya kuthi vu khona, ndiya kuthi vu khona; Abantu bakowenu baya kuba ngabantu basekhaya, noThixo wakho abe nguThixo wam; Apho ufela khona, ndiya kufela khona, ndingcwatyelwe khona. INkosi yenza njalo kum, kwaye ikwongeze, ukuba nantoni na ngaphandle kokufa kusahlula mna nawe.
31. KwabaseRoma 12:10: 'Yibani nothando omnye komnye. Hloniphanani ngokwenu. '
32. 1 Petros 4: 8: 'Okubaluleke ngaphezu kwako konke, qhubekani nibonisa uthando olunzulu omnye komnye, kuba uthando lugubungela inkitha yezono.'
33. Kwabase-Efese 5:21 : 'Thobelanani ngokoyika uKristu.'
34. Kwabase-Efese 4:32: 'Yibani nobubele omnye komnye, nibe nemfesane, nixolelane, njengokuba naye uThixo wanixolelayo ekuKristu.'
35. IGenesis 2: 18-25: Wathi uYehova uThixo, Akulungile ukuba umntu abe yedwa; Ndiya kumenzela umncedi onguwabo. ' ... Waza uYehova uThixo wawisa ubuthongo obukhulu phezu koAdam, wathi elele, wathabatha lwalunye ezimbanjeni zakhe wavala indawo yalo ngenyama. UYehova uThixo walwakha ubambo abeluthabathe kuAdam, lwaba ngumfazi; wamzisa kuAdam.
ilokhwe yokuqeshisa undwendwe lomtshato
36. 1 Petros 3: 7: 'Ngokunjalo, nani madoda, bonakaliseni imbeko kubafazi benu. Phatha umfazi wakho ngokuqonda njengoko nihlala kunye. Unokuba buthathaka kunani, kodwa uliqabane lakho elilinganayo kwisipho sikaThixo sobomi obutsha. Mphathe ngendlela ofanele ngayo ukuze imithandazo yakho ingathinteleki. '
Ukongeza kwezi vesi zeBhayibhile malunga nomtshato, uthando kunye nobudlelwane, sikwazidibanisile ezi Iingcaphuno zothando lweBhayibhile ukukunceda ukongeza kwiivesi zakho malunga nothando, kunye nezicatshulwa ezongeziweyo ezili-150 malunga nothando. Unokufuna ukufaka ezi zibhalo kuthando kuwo wonke umtshato wakho okanye nakweyiphi na inkqubo yakho, izimemo, amanqaku enkosi kunye nokunye.
Kwaye ukukhokelwa ngakumbi ngomtshato wakho, Ihlala ihleli ihlala ifikeleleka kwaye izinikele ekuphuculeni impilo yobudlelwane bakho.
izimvo zeqela lesidanga se-los angeles
izinto zokuxoxa ngaphambi komtshato
iindawo zokwenza itheko le-bachelorette
Ifama yokurenta kwimitshato